‘Tsy Averina Intsony Mandrakizay’: Tamberin’ny Shiliana Momba Ny Fanonganam-Panjakana, 40 Taona Izay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2013 23:48 GMT
Fidarohana Baomba ny La Moneda tamin'ny 11 Septambra 1973. Sary avy amin'ny Wikimedia Commons eo ambany fahazoan-dalana Creative Commons license CC BY 3.0 CL
40 taona taorian'ny fanonganam-panjakana sy 23 taona taorian'ny fiverenan'ny firenena ho amin'ny demokrasia, dia naka saina momba ny fanonganam-panjakana sy izay tsy maintsy ataon'ny firenena hahatrarana ny fampihavanana ny Shiliana.
Ny Bilaogera Camila nanadihady ny tatitra an-gazetin'ny tsingerintaonan'ny 11 Septambra tamin'ny 2013 sy ny “firosoan-dia” amin'ny maha-fiarahamonina:
Ahoana moa no hanadinoantsika sy hamadihana ny pejy, raha mandrotsaka vaovao matroka ho antsika isan-taona ny fampitam-baovao? Manaiky aho hoe tsy maintsy miroso isika, manaiky aho fa tsy ilaina ny herisetra, manaiky aho fa fahadisoan'ny antoko roa tonta noho ny antony samihafa izay nitranga, saingy TSY ekeko ny fanehoa-kevitra tsy misy fanajana sy tsy misy fanadihadiana, ny toy ny hoe “Adinoy iny fotoana iny”. Maro ny zavatra mifamahofaho ao. Fanajana kely ho an'ireo lasibatry ny fandripahana izay niainantsika taona maro lasa izay. Handroso ihany isika ary hanadino rehefa tena fiaraha-monina mivondrona mitady hamoaka ny marina irery ihany sy miray soroka amin'ireo nangirifirin'ny fahabangana noho ny fahalasanan'ireo olona tiany, fa raha mbola mifandrirotra lavitra amin'ny “sady tsy hamela no tsy hanadino” sady “manadino sahady” tsy nisy fifanampiana dia mbola hitoetra ho fiaraha-monina misaratsaraka sy tsy mihetsika.
Manaiky i Camila G Arriagada ao amin'ny Twitter fa tokony hiasa ao anatin'ny fampiraisana ny firenena:
Manaiky amin'ilay fehezanteny hoe “sady tsy mamela no tsy manadino” aho, saingy tsy maintsy mieritreritra aho fa tsy maintsy mbola miasa ao anatin'ny fampiraisana ny firenena isika 40 taona aty aoriana
Saingy nanoratra i Teresa Quirino fa tsy maintsy ny fitsarana no mialoha ny fampihavanana:
Tsy hisy fampihavanana mandrakizay raha tsy misy ny rariny [fitsarana] ! efa 40 taona lasa sahady izay ary mbola misy ny olona tsy nanefa ny heloka vitany tamin'ny 11 Septambra
Mandritra izany fotoana izany dia nisioka i PelaoAndrew fa tokony ampidirina hosainina ihany koa izay nitranga nialoha ny fanonganam-panjakana:
Tsy ampy ny miresaka momba ny tantara hahafantarana fotsiny izay nitranga 40 taona lasa izay…tokony hofantarinao ihany koa izay nitranga nialoha kely izany
Mizara fomba fijery hafa kosa ny mpanohana an'i Augusto Pinochet sasany tahaka an'i Felipe Abalos:
40 taona androany ny fandresen'ny fahafahana manoloana ny fankahalana sy ny adin-tsaranga. Te-hiteny fotsiny aho hoe misaotra anao Filoha Pinochet.
Miantso ny namana Shiliana, tahaka ny maro hafa ny mpisera @May_Grondona mba ho antoka fa tsy hitranga intsony ny zava-mitranga tahaka ny fanonganam-panjakana tamin'ny 11 Septambra 1973:
40 taona aty aoriana isika miantso hanome fanatsiarovana fa tsy lolompo ho an'ny taranaka ho avy, mba tsy hitranga intsony ny tahaka izany.
Ao amin'ny El Mundo Sigue Ahí (Mbola eo izao tontolo izao) ny bilaogera Roberto Arancibia [es] namoaka ny eritreriny momba ny fanonganam-panjakana, izay niainany fony izy mpianatra 17 taona, ary amin'izao tsingerintaona faha-40 taona izao no nanoratany hoe:
Mameno ny Media famintinana sy fandaharana manokana, samy mamoaka ny fanambarany, ny zavatra fantany ary ny marina tapany fantany ireo mpifanandrina ao amin'ny tantara. Ny sasany mangataka famelana. Ny sasany mankalaza, ny hafa misaona. Ny hafa zara raha “mahatsiaro”. Ary misy amintsika nilazaona, misy ny niaina nanavatsava izany manontolo, na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany, vavolombelon'ny fotoana sarotra, taranaka indray miaina roa mifandimby isika no voamariky ny daty iray, voamariky ny sarin'ny Jeneraly sy ny zavatra rehetra manodidina azy. Taranaka X. Niaina 13 taona izany tsy fahazoana mivoaka amin'ny alina amin'ny vatantsika, nandritra ny fiainana nahazatovo, nandritra ny fiainana nahalehibe. Ary mandritra izany fotoana izany, manjavona ny olona, profesora, namana na fianakaviana
Namara-teny i Arancibia:
Saingy isika no sisa velona, ary tsy zavatra bitika izany. Ary tsy misy, tsorina, tsy nisy ny afa-bela.
Ilaozana ny lolompo, ampianarina ny fanajana, ezahina ny mahatakatra ny hirifiry ary omena tanana ireo izay mila izany. Ambonin'izany rehetra izany, atsahatra ny fandavana izany. Tsy avela hitranga intsony mandrakizay izany.
Izany ve no lalana? Iza no mila valifaty? Afaka mandresy izany ve isika? Ambonin'izany rehetra izany, aoka izay mandrakizay.